Zanzibar inozivisa zvinotenderwa kupfeka kodhi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Tanzania Breaking News » Zanzibar inozivisa zvinotenderwa kupfeka kodhi
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Resorts • Kutarisirwa • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Munzvimbo dzeruzhinji muZanzibar, vashanyi vanofanirwa kuvhara miviri yavo kubva pamafudzi kusvika pamabvi.
Vagari vemuZanzibar vanowanzo shamisika nechitarisiko uye kushayikwa kwezvipfeko kune vamwe vevanozorora
Zanzibar icharanga vashanyi nechitarisiko chisina kukodzera
Zvichienderana nekukura kwemhosva, mushanyi anogona kubvisiswa faindi mazana manomwe emadhora zvichikwira
Zanzibar's Stone Town Airport yakagamuchira avhareji yeanosvika makumi matatu evashanyi mumwedzi yapfuura. Vagari vemunharaunda vaiwanzoshamiswa nechitarisiko uye kushayikwa kwezvokupfeka kune vamwe vevazororo. Ipapo zviremera zvehurumende yeAfrica zvakasarudza kuunza kodhi yekupfeka.
Gurukota rezvekushanya kuZanzibar Lela Mohammed Moussa akati zvikwereti uye faindi zvichaiswa kuvashanyi, vatungamiriri uye vashanyi vekushanya kwemhando dzisina kukodzera dzekupfeka dzinopfekwa paruzhinji pachiwi.
“Munzvimbo dzinowanikwa veruzhinji muZanzibar, vashanyi vanofanira kuvhara miviri yavo kubva pamafudzi kusvika pamabvi. Ichi hachisi chinhu chitsva… Ibasa revashanyi kuti vanzwisise tsika nemitemo yemaitiro mumugwagwa, ”vakadaro Gurukota.
Zvichienderana nekukura kwemhosva, mushanyi anogona kubvisiswa faindi mazana manomwe emadhora zvichikwira. Vafambi vekushanya vanotarisana nemari ye $ 700-1000 uye kumusoro.
Kunyangwe paine COVID-19-zvine chekuita nezvirambidzo uye nyowani inofanirwa yekupfeka kodhi, pakange pasina kuderera muhotera uye nzvimbo dzekushanyira kuZanzibar.